Uyikhuphela njani Windows 10 simahla nge-serial | Iindaba zeGajethi
Uyikhuphela njani Windows 10 kunye nenombolo ye-serial ifakiwe
Izolo enye yezona ndaba zibalulekileyo ikhutshelwe bonke abo basebenzisa inkqubo yokusebenza yeWindows kwiikhompyuter zabo; Ngokukodwa, igama elitsha lenkqubo yokusebenza eliza kubakho ukusukela phakathi ku-2015 ayizukuba lilo elihletywayo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kodwa, enye Windows 10.
Inani elikhulu lezinto ezinqabileyo zakhutshwa kwaye phakathi kwazo, ezinye zaba zi-anecdotal ngokupheleleyo kwaye zinomdla, efanayo ukuba sicebisa ukuba ufunde kuba xa sele unayo le Windows 10 ezandleni zakho, Into enokubakho ngeli xesha njengoko eli nqaku liza kukufundisa ukukhuphela le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza yasimahla nenani le-serial elibandakanyiweyo.
1 Yintoni endiyifunayo ukuyikhuphela Windows 10 kunye nenombolo ye-serial ifakiwe?
2 Ezinye iindlela zokufaka Windows 10
Yintoni endiyifunayo ukuyikhuphela Windows 10 kunye nenombolo ye-serial ifakiwe?
IMicrosoft ibhengeze izolo kwenye yeengxelo zayo, oko kukuthi nabani na unokuzikhuphelela ingxelo yamva nje yenkqubo yabo yokusebenza (Windows 10), ukuze bavavanye kwaye bavumelane nezibonelelo ezitsha ezinokuthi zibonelelwe lolu hlaziyo. Ngesi sizathu, akukho luqobo kuthintelo malunga nokusetyenziswa kwalo nje ukuba imigaqo-nkqubo ecetywayo yiMicrosoft yamkelwe kwaye iyahlonitshwa; Emva koko siya kukucebisa ukuba ulandele amanyathelo ambalwa ngokulandelelana ukuze ukhuphele Windows 10 ngenombolo ye-serial ebonelelwe ngabantu abafanayo kwiMicrosoft.
Vula isikhangeli se-Intanethi odla ngokusebenza ngaso kwiakhawunti yakho yeMicrosoft (enokuthi ibe yiHotmail kunye ne-Outlook.com).
Ngena kunye neziqinisekiso zokufikelela kuzo naziphi na kwezi nkonzo.
Ngoku yiya kwiwebhusayithi esemthethweni ye IMicrosoft Insider.
Uya kufumana iscreen esifana nale siza kuyicebisa ngezantsi, kufuneka ucofe kwiqhosha elithi «Ngena ngoku«.
Uya kumenywa ke ukuba wamkele Windows 10 imigaqo-nkqubo yokusebenzisa ilayisensi ecetywayo nguMicrosoft.
Kwiwindow elandelayo kufuneka ucofe kwikhonkco elingezantsi (ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka) eliza kukuvumela ukuba utsibe uye Windows 10 Ukukhuphela iwindow.
Intloko ukuya ezantsi ukuya khetha umfanekiso we-ISO Windows 10 ukuba unomdla wokukhuphela.
Phezulu linombolo yesiriyali ekufuneka uyisebenzisile ukufaka i-10, ekufuneka uyikope kwaye uyincamathisele kuxwebhu ukuze uyigcine kwikhompyuter yakho.
Ngala manyathelo alula kwaye emva kwexesha elide uya kuba nawo kwikhompyuter yakho Ukhutshelwe ku Windows 10 umfanekiso we-ISO; Okwangoku zimbalwa kuphela iilwimi ezifumanekayo kolu vavanyo lwenkqubo yokusebenza yeMicrosoft, ke kuyakufuneka silinde ixesha elithile ukuba iilwimi ezahlukeneyo (kubandakanya iSpanish) zicetyiswe ngokusesikweni.
Ubunzima obulinganiselweyo bomfanekiso we-ISO budlula i-3 GB, ke kuya kufuneka ubenendawo eyaneleyo kwindawo apho ukhuphela khona ifayile.
Ezinye iindlela zokufaka Windows 10
Nje ukuba ukhuphele ngaphandle Windows 10 kuya kufuneka uqhubeke ukuyifaka ngokwenqanaba lamava akho; Kwicala lethu, sinokucebisa ngeendlela ezimbalwa zokwenza lo msebenzi, ezi zilandelayo:
Inkqubo yokusebenza eyiyo. Ungathembela kwesinye sezicelo ezininzi ukwenza umatshini obonakalayo kwaye apho, kuya kufuneka usebenzise umfanekiso we-ISO (kunye nenombolo ye-serial) oyikhupheleyo ngaphambili.
Inkqubo yokusebenza yeebhuthi ezimbini. Unokufaka kwakhona Windows 10 kwikhompyuter yakho ngokukhetha isahlulelo esithile sesiphumo; Kuba inguqulelo yesilingo, i-20 GB isenokwanela kwesi sahlulelo apho uza kufaka khona inkqubo yokusebenza.
Olunye uhlobo lwesibini esele silukhankanyile, kuya kufuneka ulwenzile dlulisa wonke umxholo womfanekiso we-ISO kwintonga ye-USB ukuba ikhompyuter yakho ayinayo itreyi yediski. Olu hlobo lwecala, sicebisa sebenzisa isixhobo esikhethekileyo, esele sithethe ngayo ngaphambili.
Uhlaziyo: Eli nqaku labhalwa kwi-2014 xa Windows 10 yayisaphuhlisweni. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya Ndwendwela eli nqaku ukufaka iiwindows 10
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyikhuphela njani Windows 10 kunye nenombolo ye-serial ifakiwe
URenzo Collantes Valer sitsho
Ngaba ilayisensi ayiphelelwa ngo-Epreli 2015?
Phendula uRenzo Collantes Valer
Ndicinga ukuba kunjalo. Kodwa inombolo yelayisensi enikiweyo, kuzo zonke iimvavanyo zam zokufaka (Ekhaya kunye neShishini) khange ibuzwe. Enkosi ngolwazi, sele sinegalelo elongezelelekileyo esiza kuthi sonke silithathele ingqalelo ngokuqinisekileyo.
ngubani ondinika ilayisensi ye-windows 8.1 yokuvula ifaaa
UJuan Chirinos sitsho
Inqaku elihle. Kubi kakhulu ukuba abayiniki inguqulelo yeSpanish, okanye ngaba ulwimi lunokutshintshwa?
Phendula uJuan Chirinos
Molo Juan, akukho phakheji ngeSpanish okwangoku, kodwa iMIcrosoft ngokuqinisekileyo iya kuyiphakamisa njengephakheji yokukhuphela njengohlaziyo okanye njengefayile. Ndiza kuphakamisa umzekelo wayo ngeWindows ngokubanzi, nangona isetyenzisiwe kwiWindows 7 ngelixesha kusithiwa iphakheji ibonisiwe. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela kutyelelo lwakho.
UJuan Pablo Chirinos sitsho
Enkosi Mnu. Rodrigo ngempendulo yakho enobubele kunye nengqwalaselo. Ozithobileyo.
Phendula uJuan Pablo Chirinos
Ngaba ikhona ingozi yokwenyani kwi-pc yakho?, uyazi ukuba yi-beta kunye nokuvavanywa,. enkosi !
Akukho bungozi kuba luguqulelo olusemthethweni kwaye alunakuphikiswa. Ndicebisa ukufaka Windows 10 kwisahlulelo sediski ukuze usebenze ngesixhobo sehardware ngokungafaniyo. Enkosi ngotyelelo lwakho.
Umbuzo wam kungenxa yokuba une-boot ezimbini ezine-linux, ukuba i-w10 boot iyakukhathaza yonke into, umbuzo wam ngowokuba ingaba le nto ingenzeka njenge-beta, notshintsho endicinga ukuba luza kuba sesi sigaba! ,, enkosi
Ngokwam, ndine Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Pro kunye Windows 10, ke iinketho ezi-3 ziyavela kuMlawuli weBoot. Andizukwazi malunga neLinux kwi-bootloader, njengoko kuyinyani into oyithethayo, ngamanye amaxesha iWindows iyonakalisa. Andazi ukuba inokwenziwa kwimeko yakho, kodwa iLinux ifakelwe ngokubanzi ekugqibeleni, ukuze umphathi wayo oyise. Enkosi ngomdla wakho kunye notyelelo kwaye ndiyathemba ukuba umntu okhetheke ngakumbi kwiLinux, anganika ingxelo ngalo mbandela.
URodrigo, ungandixelela ukuba kunyanzelekile sinyanzelise isisombululo?
UMarc ... akukho sidingo sokunyanzela isisombululo, kuba ungasebenza ngokuzolileyo nalowo ubuhlala usebenza naye. Ewe kunjalo, oku kuxhomekeke ekubeni Windows 10 ulibonile ikhadi lakho lemizobo. Kwimeko yam kwakungekho ngxaki kwaye andinangxaki kwi-1920 × 1080 px. Imibuliso kunye nombulelo ngezimvo kunye notyelelo.
JR UMarklin sitsho
NdineWindows 8.1 Ngaba ndingafaka iW10 ngaphezulu okanye kufuneka ifomathiwe
Phendula JR Marklin
Ungaze uhlaziye ingxelo ezinzileyo nohlobo lovavanyo. Ndikucebisa ukuba wenze isahlulelo sediski enzima kunye nomphathi wediski yeWindows ukuze ungalahli ulwazi (ndicinga ukuba uyazi ukuba ungayenza njani kwaye emva koko ufake iWindows 10. Unokwenza umatshini obonakalayo nangona, kunjalo ayisebenzi kangako. Imibuliso kunye nombulelo kutyelelo lwakho kunye nezimvo.
Okokuqala malunga nezimvo ze-GNU / Linux, iiWindows zisebenzisa i-bootloader (andisayikhumbuli isifinyezo sayo: S) kunye ne-GNU / Linux isebenzisa ezinye, umphathi weWindows akahambelani ne-GNU / Linux, ke ukuba ufaka iWindows Ngaphandle kwe Ukuhanjiswa okukhoyo ngoku, umphathi wayo uyakucima i-GRUB kwaye ukuqala kokuhambisa kwakho kuya kuthi shwaka kwaye njengoko ukufumana i-GRUB kuyinto ebhetele, kungcono ukufaka iWindows kuqala emva koko ibe yi-GNU / Linux.
Kwi-Windows 10, andiyifaki, ukuba ngeWindows 8.1 ndineengxaki zokusombulula kunye nabaqhubi, ndingakanani ngakumbi endinokufumana entsha kunye nokungazinzi ngenxa yophuhliso?
JJ, ukuba unayo iWindows 8.1 ndiyakuxelela ukuba ngoku ungasebenzisa uMguquli weSkype… Ndifumene isaziso ukuze ukwazi ukuncokola nabahlobo abasuka kwamanye amazwe ngoguqulelo lwexesha langempela. Ukubulisa kunye nombulelo ngezimvo zakho.
Ndisandula ukuqala ukhuphelo lwesifakelo ngeSpanish. Kwimeko yokutyunyuzwa kweGrub, indlela elungileyo yokuyifumana kwakhona kunokuba sisixhobo sasimahla se-EasyBCD.
Ndicinga ukuba kwilaptop yam ka-6400 Dell Inspiron 2007 (4GB kunye ne-SSD) iya kuhamba ngokungathi kukudubula. Iimpukane zeW7….
pernida dilia sitsho
Molo, ukufakelwa kwenziwa simahla, ngoku iyandicela ukuba ndingene kwisitshixo sokuqinisekisa kwaye andinayo njengoko ndinjalo
Phendula kwi-dilia pernida
Molo, bendinombuzo ekungekho mntu wakwazi ukuwuphendula. Ndine-7-bit windows 32 ikhompyuter (nangona ikhompyuter yam ixhasa i-64-bit), ndiye ndaphucula ukuya kwiwindows 10 kwaye ngokucacileyo ibeke inkqubo engama-32. Ngaba ndingaba nazo ii-windows 10 64-bit ngandlela thile, ngaphandle kokuhlawula? Iphasiwedi yam yeyokuqala
Ukukhuphela kuyo nayiphi na iwebhu. Zama ukwenza ukhuphelo lwezinto zakho ngaphambili ... kwimeko enokwenzeka.
URichard ¨villero¨ Fernandez sitsho
NdinguRodrigo, ndingawenza njani umbuzo? kum Windows 7 inkqubo yokusebenza ngeSpanish kwaye ndihlaziyiwe Windows 10 Ndaye ndafunda ukuba ngaphezulu kwenkqubo enye yokusebenza kumatshini kunokuba njalo? Ndingayenza njani loo nto? Kwaye omnye umbuzo yindlela endinokwahlulahlula ngayo idiski yam ngaphandle kokulahlekelwa yiyo nantoni na (iifoto, iividiyo, njl njl. kakhulu kakhulu
Phendula URichard ¨villero¨ Fernandez
URicardo Rivera sitsho
Molo, molo emva kwemini, xa ndihlaziya, indinike ithuba lokuhamba nge-pendriver, enako ukubonwa, kodwa indicela ilayisensi okanye ndiyishiye ukuba ndiyayishiya.
Phendula uRicardo Rivera
Le serial ayisebenzi kum. Umntu othile undinike enye indlela okanye isitshixo?
Imibuliso yeCordial ,,, enkosi kakhulu ngegalelo kodwa iphasiwedi ayiveli kum, kuphela yiMediaCreationTool.
ondincedayo ndifuna isitshixo seewindows 10
inombolo ye-serial ayiveli
7 ii-smartphones onokuzithenga ngaphantsi kwe-100 euro